ဘရာဇီးခရီးစဉ်စုဆောင်း: Computer ကိုပညာရှင်များမာစတာရဲ့အစီအစဉ် - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
မေလ2- မေလ 20, 2019
အဆိုပါကွန်ပျူတာပညာရှင်များစီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှမာစတာရဲ့အစီအစဉ် 2500 ကတည်းက 85 လူအမျိုးမျိုးထံမှ 1996 + ဘွဲ့ရနှင့်အတူ, United States မှာအများဆုံး, ထူးခြားတဲ့လူကြိုက်များနှင့်အောင်မြင်သောကွန်ပျူတာသိပ္ပံက MS ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် 800 လက်ရှိကျောင်းသားများကိုထက်ပို။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦးဘွဲ့ရအဆင့်၏အဆင့်မြင့်ပညာရှင်များပေါင်းစပ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်မဟာဘွဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ paid Intern များကိုအတူ။
မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့် applications များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာတုံ့ပြန်ငါတို့သည်ဘရာဇီးကနေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခံယူ, Greg Guthrie, Ph.D ဘွဲ့ကိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာဌာနမှူး, နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပါမောက္ခများနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအစီအစဉ်ဒါရိုက်တာ၏ကျောင်း, ဒင်းဂုဏ်ထူးဆောင် Elaine Guthrie ခရီးသွားပါလိမ့်မည် Sao Paulo, Curitiba, Belo အလျားလိုက်, Brasilia, ရစီးဖီ နှင့် ရီယိုဒီဂျနရို မှ မေလ 2, 20 မှ 2019 နိုင်ပါစေ တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်အလားအလာကျောင်းသားများနှင့်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်။
အစီအစဉ်ညွှန်ကြားရေးမှူး Elaine Guthrie နှင့်အတူဘရာဇီးလ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမဟာကျောင်းသားများ - ကြည့်ရှု ဗွီဒီယို.
Sao Paulo: ကြာသပတေးနေ့, မေလ 2nd, (6: 00 pm တွင် - 8: 30 pm တွင်): တည်နေရာ: Cubo Itaú, Alameda Vincent Pinzon, 54, Vila Olimpia, Sao Paulo 04547-130 ။ ဖုန်းနံပါတ်: + 55 (11) 97198-7477 ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ။ **ကျေးဇူးပြု အီးမေးလ်က သင့်ရဲ့အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးနံပါတ်နှင့်ဖြစ်ရပ်မှဆောင်ခဲ့ရမည်။ **
Curitiba: စနေနေ့, စနေနေ့, မေလ 4th, (9: 30 AM - 12: 00 မွန်းတည့်): တည်နေရာ: ရှိတဲ့ Radisson ဟိုတယ် Curitiba, Avenida ဆည်တည်းက de Setembro, 5190, Batel, Curitiba, 80240-000 ။ ဖုန်းနံပါတ်: + 55 41 3340-4070 ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
Belo အလျားလိုက်: တနင်္လာနေ့, မေလ 6th, (6: 00 pm တွင် - 8: 30 pm တွင်): တည်နေရာ: မာကျူရီက Belo အလျားလိုက် Lourdes, Avenida Contorno, 7315, Lourdes, Belo အလျားလိုက် 30110-047 လုပ်ပါ။ ဖုန်းနံပါတ်: + 55 31 3298-4101 ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
Brasilia: ကြာသပတေးနေ့, မေလ 9th, (6: 00 pm တွင် - 8: 30 pm တွင်): တည်နေရာ: Meliá Brasil 21, SHS Quadra 6-BL ။ ခ D ကိုအီးအက်ဖ်အာသနန်းစံ Sul, Brasilia, 70316-000 ။ ဖုန်းနံပါတ်: + 55 613218-4700 ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
ရစီးဖီ: အင်္ဂါနေ့, မေလ 14th, (6: 00 pm တွင် - 8: 30 pm တွင်): တည်နေရာ: ဒီဇိုင်းရေးစင်တာ - Apolo 235, Rua Apolo ပြုnº 235, 1º andar, Bairro ရစီးဖီ, 51030-220 လုပ်ပါ။ ဖုန်းနံပါတ်: + 55 81 3302-4446 ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
ရီယိုဒီဂျနရို: တနင်္လာနေ့, မေလ 20th (6: 00 pm တွင် - 8: 30 pm တွင်): တည်နေရာ: PortoBay ရီယို Internacional, AV ။ Atlântica, 1500-Copacabana, Rio de Janeiro မြို့-RJ, 22021-000 ။ ဖုန်းနံပါတ်: + 55 21 2546-8000 ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ. နယူးအချိန်နှင့်နေ့စွဲ